नाकाबन्दीका डिजाइनर एस.जयशंकरलाई सरकारको रेड कार्पेट !::News from Nepal
काठमाडौं । संविधान जारी हुनुभन्दा २ दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर संविधान जारी हुनलाई जबरजस्ती रोक्न आएका तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर मोदीको दोस्रो कार्यकालमा विदेशमन्त्री बनाएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भ्रमणमा आउन पुनः निमन्त्रणा पठाएका छन्।
जयशंकर विदेशमन्त्री भएलगत्तै बधाई सन्देशसहित नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि पुनः निमन्त्रणा पठाएका हुन्।
भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले असार ३ गते विदेश मन्त्रालयका सचिव विजय गोख्लेसँग भेटेर जयशंकरको नेपाल भ्रमणको समय तय गर्न आग्रह गरेका थिए। यस विषयमा मन्त्री जयशंकरसँग कुरा गरेर जानकारी गराउने गोख्ले जवाफ दिएको बताइएको छ ।
दूतावासकाअनुसार विदेश मन्त्री जयशंकर विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आउने कार्यक्रम रहेको छ तर मिति तय भएको छैन। विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा राजनीति, सुरक्षा, दुई देशको सीमा, आर्थिक सहयोग, जलस्रोत, दुई देशको शिक्षा, सँस्कृति लगायतको विषमया छलफल हुने बताइएको छ।
मोदीकै डिजाइनमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए ।
मोदीका सांसदको लाजमर्दो हर्कत !
छिमेकी मुलुक भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकसभाको निर्वाचनमा भारी मतका साथ विजयी भएर दोस्रो कार्यकालका लागी पनि भारतीय सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका छन् , आफुलाई अत्यन्तै इमान्दार र अध्यात्मि ठान्ने प्रधानमन्त्री मोदीलाई उनकै एक सांसदले हालै गरेको एउटा क्रियाकलापले भने लज्ज्ति बनाएको छ ।भारत उत्तर प्रदेशको उन्नावबाट विजयी भएका भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०का सांसद साक्षी महाराज बुधकार सीतापुर जिल्ला कारागार चलान भएका छन । उनले त्यहाँ बन्दी रहेका भाजपा विधायक कुलदीप सेंगरसँग भेटघाट गरेका छन ।